आसा शक्तिशाली सागर। को एक मत्स्यस्त्री देखीएको छ को लेखक संग साक्षात्कार? | वर्तमान साहित्य
फोटोग्राफी: Mar Aísa Poderoso को सौजन्य।
आसा शक्तिशाली सागर उनी जारागोजा, इतिहास मा एक प्रोफेसर र एक लेखक संग एक प्रोफेसर हो। उनको पछिल्लो उपन्यास हो ¿मत्स्यस्त्री कस्ले देखेको छ? यो मा साक्षात्कार उहाँले हामीलाई उनको बारेमा बताउनुहुन्छ, उनको क्यारियर, चासो र परियोजनाहरु। धेरै धन्यवाद तपाइँको दया र तपाइँको समय को लागी।
Mar Aísa Poderoso - साक्षात्कार
साहित्यिक समाचार: तपाइँको नयाँ उपन्यास हकदार छमत्स्यस्त्री कस्ले देखेको छ? तपाइँ हामीलाई यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ र विचार कहाँ बाट आयो?
शक्तिशाली समुद्र AÍSA: यो Cdenrdenas भाइहरु को एक दोस्रो मामला हो, जो पहिलो को स्वतन्त्र रूपमा पढ्न सकिन्छ, Dostoevsky घाँस मा। उनीहरु अपराध नोयर उपन्यासहरु हुन्, मुख्य रूप बाट Logroño मा सेट गरीएको छ, शहर जसमा म बीस छब्बीस बर्ष को लागी बसेको छु, र अभिनय डिएगो Cdenrdenas, एक उप पुलिस निरीक्षक र उनकी बहिनी, Lucía, एक अनुवादक। उनीहरु दुबै एक कठिन समयमा, जीवन संग निराश छन्। ठ्याक्कै उनीहरुको आपसी सहयोग र मामिलाहरु सुल्झाउने मा उनीहरुको जटिलताले उनीहरुलाई थोरै थोरै गरेर आफैंलाई खोज्न नेतृत्व गर्दछ।
त्यहाँ पनि विभिन्न microcosms संग छन् माध्यमिक पात्रहरु जसले पाठकहरुको स्नेह जितेका छन् कोरोनर जस्तै, डिएगो को साथी पुलिस अधिकारीहरु, वा Luc agencya को अनुवाद एजेन्सी मा। पहिलो उपन्यास प्रकाशित गर्नु भन्दा पहिले मैले यो दोस्रो केस लेख्न थालेँ, किनकि म विश्वस्त थिए कि यी पात्रहरुको यात्रा धेरै थियो; म आफैं जान्न चाहन्छु कि उनीहरु कुन दिशामा जाँदैछन्।
मेरो उपन्यास को शुरुआत सामान्यतया एक छवि संग मलाई आउँछ, एक फ्ल्यास। यस मामला मा यो सैन Bartolomé को गोथिक मुखौटा मा एक सानो मत्स्यांगना को थियो, Logroño को केन्द्र मा स्थित एक सुन्दर चर्च। यहीं बाट उपन्यास सुरु हुन्छ। उनले पहिलो को सार कायम राख्ने चुनौती को सामना गरे, तर यसलाई नयाँपन दिए।
यस अवस्थामा, डिएगो आफ्नो घरमा एक मृत वृद्ध दम्पती को उपस्थिति सामना, के लै gender्गिक हिंसा को एक स्पष्ट मामला मा देखिन्छ। एक ड्रेसिंग टेबल मा लुकेका केहि पुराना पत्रहरु को खोज, एक साथ एक एजेन्डा मा एक भाग्य बताउने संग केहि अजीब नियुक्तिहरु देखा पर्छन्, अनुसन्धान को लागी एक मोड को लागी नेतृत्व गर्दछ। उपन्यास को सेटिंग्स पनि हामीलाई जस्तै ठाउँहरु मा लैजानुहोस् पेरिस वा Zaragoza, मेरो गृहनगर, जसमा एउटा दृश्य सधैं खुल्छ।
पाठकहरु पहिले नै मलाई आफ्नो छाप पठाउँदै छन्; उनीहरु लाई यो मन पर्छ र एक मनमोहक साजिश को बीच सन्तुलन को सराहना गर्दै छन्, पात्रहरु संग उनीहरु सहज महसुस गर्छन् र भेट्न चाहन्छन्, वातावरण र भावनाहरु। यो मेरो लागी महत्वपूर्ण देखिन्छ कि, कथानक को अतिरिक्त, पाठक स्वाद र अन्य पहलुहरु लाई खोज्न सक्दछन् कि जब यो समाप्त हुन्छ अनुनाद जारी छ। अर्को विलक्षणता हो कला, इतिहास वा क्लासिक सिनेमा को सन्दर्भ, कथा मा एम्बेडेड।
मँ माया गर्छु कि उनीहरु मलाई भन्छन् कि उनीहरु यो रहस्य को अन्वेषण गर्न को लागी समाप्त गर्न चाहन्छन्, तर त्यो, एकै समयमा, उनीहरु को लागी उनीहरुलाई खेद लाग्छ किनकि उनीहरु उपन्यास भित्र धेरै सहज महसुस गर्छन्। म धेरै धेरै खुलाउने छैन, यो राम्रो छ कि पाठकहरु आफैंले यो आफैंलाई पत्ता लगाउँछन्।
नक्शा: म लेख्छु किनकि म एक पाठक हुँ। एक पाठक जो भएको छ र उनी एक बच्चा थिए पछि पढ्न धेरै खुसी छ। पढ्न सिक्नु भन्दा पहिले, म कथा सुन्छु मेरी हजुरआमाले सुत्न जानु अघि मलाई भन्नुभयो। त्यसपछि आयो Ferrándiz को मर्ने कथाहरु। पछि एनिड ब्लिटन, भिक्टोरिया होल्ट... र, अन्तमा, सयौं किताबहरु को लागी उछाल कि मेरो बुबा पुस्तक पसल मा थियो। पक्कै, अगाथा क्रिस्टी यो महान खोज थियो। पछि जस्तै अन्य लेखकहरु आए पर्ल एस बक, लियोन Uris, मिका Waltari, कोलेट, आदि धेरै चाँडै म मेरो बुबा संग हरेक शुक्रवार एक किताब को पसल मा जाने र हप्ता को लागी दुई किताबहरु किन्ने बानी पर्यो। यसरी म पनि मेरो आफ्नै पुस्तकालय गठन गर्न थाले। मँ यसलाई शुद्ध खुशीको रूपमा सम्झन्छु।
मैले मेरो पहिलो कथा लेखें जब म सात वर्षको थिएँ, EGB को दोस्रो मा। मलाई याद छ किनकि त्यो कोर्स मेरो शिक्षकले मलाई घरमा उनको आफ्नै प्रतिलिपि पढ्न दिनुभयो सानो राजकुमार; मँ पृथ्वीमा सबैभन्दा खुशी केटी जस्तै लाग्यो। यसले मलाई एक नोटबुक मा मेरो आफ्नै कथाहरु लेख्न को लागी प्रोत्साहित गरेको छ कि मेरी आमा हरीयो र नीलो कागज संग रेखांकित।
यस समयमा किशोरावस्था, केहि कक्षाहरुमा जसमा हामिलाई हाम्रो ध्यान राख्न गाह्रो थियो, उनले लेखे रोमान्टिक कथाहरु मेरा साथीहरु को लागी, उनीहरुले रोजेको देश मा सेट, बाकी मेरो कल्पनामा थियो। जिज्ञासु, यो एक विधा हो कि मैले फेरी छुने छैन।
पछाडि 2001 मैले लेख्ने निर्णय गरें मेरो पहिलो उपन्यास। मेरो प्रशिक्षण को लागी इतिहास मा बीए म मा आकर्षित भएको थियो ऐतिहासिक विधा। मैले उसलाई एक प्रतिष्ठित पुरस्कारमा पेस गरेँ, जुन पक्कै पनि मैले जितिन। जे होस्, मँ साँच्चै म्याड्रिड को यात्रा प्रकाशक लाई हस्तलिखित हस्तलिखित हस्तान्तरण गर्न को लागी रमाईलो लाग्यो। यो एक धेरै रमाईलो र अविस्मरणीय अनुभव थियो।
नक्शा: म एउटा छनौट गर्न सकिन; मैले धेरै लेखकहरु, जसका किताबहरु मैले मेरो जीवन मा बिभिन्न चरणहरु र पलहरुमा पढेको छु रमाईलो गरेको छु।
मलाई XIX र XX को पहिलो आधा को साहित्य मन पर्छ: जेन अस्टेन, लास ब्रुन्टे, फ्लाबर्ट, स्टेन्डल, Balzac, ओस्कर वाइल्डटलस्टॉय, Dostoevsky, एमिलिया पारडो बाजन, Clarín, विल्की कोलिन्स, एडिथ व्हार्टन, स्कट Fitzgerald, Forster, एवलिन वाह, अगाथा क्रिस्टी वा नेमिरोव्स्की.
समय मा नजिक, मँ धेरै अरु लाई उद्धृत गर्न सक्छु: इसाबेल Allende, कारमेन मार्टिन Gaite, पॉल Auster, डोना लियोन, पियरे Lemaitre, फ्रेड Vargas र धेरै अन्य। उनीहरु सबैमा समान छ कि उनीहरुले मलाई रमाईलो, प्रतिबिम्ब वा मलाई सारिएको छ। ती मध्ये प्रत्येक म मा एक छाप छोडिएको छ; मैले ती सबैबाट सिकेको छु। अन्त मा, एक लेखक को शैली उनको व्यक्तित्व, अनुभवहरु र पक्कै पनी पठन बाट बनेको छ।
नक्शा: म दुई छनौट गर्नेछु: आना करेनिना, जसको साथ उहाँ जीवन र प्रेम को बारे मा एक कुराकानी हुनेछ। म उनी संग सेन्ट पीटर्सबर्ग को सडकहरु मा हिड्न मन पराउछु, यद्यपि मलाई लाग्छ कि हामी चिया खाए पछि, महान टल्सटॉय अन्त मा रिसाएको हुन सक्छ।
अर्को चरित्र जसको साथ म एक साँझको आनन्द लिन मन पराउँछु महान संग छ Gatsby। मँ तपाइँको कम्पनी संग न्यूयोर्क भ्रमण मन लाग्दैन। उनीहरु मलाई आकर्षक पात्रहरु, रोशनी र छाया, नुक्कड र crannies, nuances को पूर्ण लाग्छ।
नक्शा: मलाई यो मन पर्छ, यदि यो हुन सक्छ, एक्लै र मौन मा लेख्नुहोस्, तर म अनुकूलित छु। एक किस्सा को रूप मा म तिमीलाई त्यो बताउनेछु मत्स्यस्त्री कस्ले देखेको छ? मैले यो जरागोजामा समाप्त गरें, एउटा सोफामा बसेर, एउटा भीडभाड कोठामा एक गद्दा पछाडि कैद, जबकि मेरो श्रीमान् र मेरा बच्चाहरु चित्र र फर्नीचर इकट्ठा। कहिलेकाहीँ तपाइँ छनौट गर्न सक्नुहुन्न।
पढ्नको लागी मलाई मात्र एउटा राम्रो किताब चाहिन्छ, बाकी मेरो लागी उदासीन छ।
नक्शा: त्यहाँ ठाउँहरु छन् जहाँ म राम्रो ध्यान केन्द्रित गर्दछु। मेरो घरमा Logroño मसंग थोरै छ डेस्कटप एउटा झ्यालको अगाडि जसको माध्यम बाट म देख्छु रूखहरु लडिरहेका छन् र मानिसहरु आउँछन् र जान्छन्; यो एक ठाउँ हो कि मलाई शान्ति दिन्छ र जहाँ म धेरै सहज छु। मा गर्मी, म लेख्न साँच्चै रमाईलो Medrano मा मेरो घर मा जहाँ म केहि सुन्दर छु पहाडी दृश्य। त्यहाँ मैले सुरु गरें मत्स्यस्त्री कस्ले देखेको छ? तर,, Dostoevsky घाँस मा यो Vinarós मा एक छुट्टी को समयमा उठ्यो। को Mar यो पनि धेरै प्रेरणादायक छ।
दिन को समय को सन्दर्भ मा, म मा लेख्न रुचाउँछु बिहान सबेरै, जब सबै अझै सुतिरहेका छन् र घर चुप छ। अर्को पटक म सामान्यतया को फाइदा लिन्छु अपरान्हमा। कहिल्यै साझमा, तब म रुचाउँछु ली। मेरो मामला मा, पठन मलाई लेखन जारी राख्न को लागी पोषण गर्दछ। यो एक दैनिक कार्य हो।
म एक शिक्षक हुँ र मैले मेरो काम र मेरो पारिवारिक जीवन को मेल खान्छु, तर म हरेक दिन लेख्न कोशिस गर्छु, यो पनी केहि शब्दहरु भए पनि। म विश्वास गर्दछु, कुनै शंका बिना, कि तपाइँ सधैं तपाइँको लागी के बारे मा ख्याल राख्नुहुन्छ र को बारे मा भावुक हुनुहुन्छ को लागी समय बनाउन सक्नुहुन्छ।
नक्शा: एक पाठक को रूप मा म माया गर्छु कथा र म पनि आनन्द लिन्छु ऐतिहासिक उपन्यास। म आफैंलाई एक दिन यी विधाहरु संग एक लेखक को रूप मा शुरू गर्न बाट इन्कार गर्दैन।
नक्शा:म पढ्दैछु वृत्ति, एशले Audrain द्वारा. यो एक आकर्षक उपन्यास, धेरै मौलिक छ। एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर कि मातृत्व को बारे मा कुरा गर्दछ र हलचल, तपाइँ उदासीन छोड्नुहुन्न। कथा को दृष्टिकोण बाट, पहिलो र दोस्रो व्यक्ति मा बयान को उपयोग धेरै रोचक छ, साथ साथै समय कूद। म यो सिफारिश गर्दछु, कुनै शंका बिना।
म Cdenrdenas भाइहरु को तेस्रो मामला संग छु, वसन्त मा स्थित छ। Dostoevsky घाँस मा शरद inतु मा विकसित हुन्छ र मत्स्यस्त्री कस्ले देखेको छ? जाडोमा. जे होस्, मँ मेरो टाउको मा bubbling नयाँ विचारहरु छन्। एक लेखक को लागी एक रोमाञ्चक पल छ: जब तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ एक राम्रो कहानी को नजिक हुन सक्नुहुन्छ।
नक्शा: यसमा कुनै शंका छैन प्रकाशन दर es ठाडो। त्यहाँ धेरै शक्तिशाली प्रकाशन समूहहरु छन् कि बजार मा हावी छन् र साना र मध्यम प्रकाशकहरु कि गुणस्तरीय वा एक धेरै विशिष्ट प्रस्ताव संग प्रतिस्पर्धा गर्न को लागी एक भीड हो। जे होस्, यो सत्य हो कि त्यहाँ बिभिन्न तरीकाहरु छन् जसद्वारा एक अज्ञात लेखक आफ्नो किताबहरु को प्रकाशन सम्म पुग्न सक्छन्। त्यहाँ यति धेरै संभावनाहरु र अवसरहरु को रूप मा अब कहिल्यै भएको छैन। प्रकाशन पछि, एक यात्रा शुरू हुन्छ जसमा लेखक एक सय प्रतिशत संलग्न हुनु पर्छ। एक संदेह बिना, सामाजिक सञ्जाल एक आवश्यक सहयोगी आफैलाई थाहा छ र तपाइँको किताबहरु लाई बढावा दिन को लागी हो। हामी सबै जान्दछौं कि यो सजिलो छैन र त्यो प्रस्ताव ठूलो छ, तर मेरो लागी, प्रत्येक पाठक जो तपाइँको किताब मा आफ्नो समय र पैसा लगानी एक अद्भुत पुरस्कार हो त्यो भन्दा बढी लगानी को प्रयास को लागी क्षतिपूर्ति।
मेरो मुटु मा मेरो सपना जाहिर छ, प्रकाशित गर्न को लागी थियो। एक लेखक लेख्छन् किनभने उनी यसलाई रमाईलो गर्छन्, किनकि उनी पात्रहरु र कथाहरु बनाउन को लागी बसेको त्यो पल मन पराउँछन्, किनकि उनीहरुलाई सास फेर्नु जरुरी छ। तर सबै भन्दा माथि, लेख्नुहोस् ताकि उनीहरु यसलाई पढ्छन्, ताकि अरुले पनि उनीहरुको कथाहरु को आनन्द लिन सक्छन्।
यो सत्य हो कि प्रकाशन मलाई अप्राप्य लाग्थ्यो। एक लामो समय को लागी म आफैलाई एक धेरै निजी तरीका मा लेख्न को लागी समर्पित, मेरो श्रीमानलाई मात्र थाहा थियो। उहाँ मेरो पहिलो पाठक हुनुहुन्छ, उहाँ इन्द्रिय को सर्वश्रेष्ठ मा धेरै आलोचनात्मक हुनुहुन्छ, र त्यसैले म उनको निर्णय मा भरोसा गर्दछु। कहिले काहि, केहि हुनु पर्छ कि तपाइँलाई पहिलो कदम उठाउन धक्का। मेरो मामला मा, यो एक धेरै छोटो समयमा दुई धेरै प्रियजनहरुको हानि थियो। त्यो पल मा म पुरा तरिकाले सचेत थिए कि त्यहाँ कुनै फिर्ता को जीवन मा एक बिन्दु छ। जब सबै कुरा समाप्त हुन्छ, तपाइँ मात्र लिनुहुन्छ के तपाइँ बाँच्नुभएको छ, के तपाइँ रमाईलो गर्नुभयो, के तपाइँ माया गर्नुभयो। मलाई लाग्यो कि म पछुताउन चाहन्न जब यो धेरै ढिलो भैसकेको थियो र कि मँ कोशिश गरेर हराउने केहि छैन।
यो सत्य हो त्यहाँ धेरै मानिसहरु छन् जो लेख्छन् र प्रकाशित गर्न चाहन्छन्, हामी यथार्थवादी हुनु पर्छ। यो एक लामो दूरी को दौड हो जसमा तपाइँले कदम उठाउनु पर्छ, लगातार हुनुहोस् र गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुहोस् यसमा।
नक्शा: हामी एक जटिल क्षण मा छौं, म लगभग भन्न चाहन्छु कि समय को परिवर्तन मा। एक इतिहासकार को रूप मा म जान्दछु कि संकट हुन्छ, भले ही यो धेरै गाह्रो छ जब तपाइँ उनीहरु लाई बस्नुहुन्छ, र त्यो पछि राम्रो समय सधैं आउँछ। कमसेकम म नयाँ पुस्ता को लागी यो कामना गर्दछु। साहित्य, कला वा संगीत को बारे मा, शायद सबैभन्दा प्रभावशाली कामहरु अँध्यारो अवधि मा उत्पन्न भएको छ। संस्कृति हल्का छ, यो सधैं बचाउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » साक्षात्कार » आसा शक्तिशाली सागर। को एक मत्स्यस्त्री देखीएको छ को लेखक संग साक्षात्कार?